जडिबुटीको मिश्रणबाट आयुर्वेदिक अण्डा बन्ने – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २८, २०७५११:०३0
काठमाडौँ । मांसाहारीको रुपमा प्रयोग गरिने अण्डामा विशेषत प्रोटिन र अन्य पोषक तत्वहरु पाइन्छ । प्राय धेरै मानिसले अण्डाको प्रयोग गर्दैनन् । त्यसकारण यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि कृषि विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरु आयुर्वेदिक अण्डा बनाउने कार्यमा जुट्न थालेका छन् ।
अब छिट्टै बजारमा आयुर्वेदिक अण्डा आउने भएको छ । कृषि विश्वविद्यालयका कुक्कुट अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. डिके सिंहका अनुसार आयुर्वेदिक अण्डा उत्पादन गर्नको लागि कुखुरालाई खानामा जडिबुटि दिने गरेको बताएका छन् । यसरी तयार भएको अण्डालाई नै आयुर्वेदिक अण्डा भनिन्छ । डा. सिंहको अनुसार यस्तो प्रक्रियाबाट तयार हुने अण्डा सेतो रंगको नभइ गुलाबी रंगको हुनेछ ।
आयुर्वेदिक तरिकाबाट तयार पारिएको अण्डामा माछामा पाइने ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ । यस्तो अण्डाको प्रयोग गर्नाले मस्तिष्क र मुटुको लागि लाभदायक हुनेछ । यो अण्डाको सेवनबाट एनिमिया र कुपोषणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय ह्याचरीमा यस्तो अण्डाको मूल्य १२ देखि १५ सम्म भारतीय रुपैयाँ पर्ने छ भने बजारमा यो अण्डाको मूल्य २३ रुपैयाँ देखि २५ रुपैयाँ सम्म हुनेछ ।
यी हुन् विश्वमा सबैभन्दा धेरै बलत्कार हुने देश ! जहा मिनेट मिनेटमा बलत्कार हुन्छ (जान्नुस्)